Waalidiin ka xanaaqay barashada afcarabiga oo iskuul hirgeliyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waalidiin ka xanaaqay barashada afcarabiga oo iskuul hirgeliyey
La daabacay fredag 29 augusti 2014 kl 14.13
Iskuul ku yaala magaalada Kristianstad ayaa arddeyda dhigata fasalka saddex u hirgliyey barshada maadadda afka-carabiga oo an waajib aheyn. Laakiin waalidiinta arddeyda ayaa arrinta aad uga gilgilshay.
- Ruux ayaa qoraalk ku yeri ”haddii ilmaheyga iskuulkas aadi lahaayeen waan gubi lahaa iskuulka oo dhan”, ayey tiri Catharina Rooth oo ah maamulaha iskuulka.
Arrintan waxay timid ka dib markii maamulaha dugsiga ay u yimaadeen qaar ka mid ah arddeyda iskuulka oo ka codsadeen in ay ka qaybgalaan casharka af carabiga ee loo dhigo arddeyda luuqadood hooyo tahay af carabi. Iskuulka aya markii danbe go’aansaday hirgelinta waxbarsho af carabi ah oo aan waajib aheyn dhigashadeeda. Madaamada arddeyda dooneyso in ay bartaan afka carabiga si ay ugu suurtogasho in ay kula sheekeystaan saaxibadood luuqadooda af carabiga tahay.
Ka dib markii arrintan ka war heleen waalidiinta arddedya waxaa iskuulka soo gaaray qooraalo caraysan oo qaarkood toos loo soo gaarsinayey iskuulka iyo weliba aaladaha ay bulsahda ku sheekeystaan.
- Sidaan u fahannay waxay waalidiinta ka gilgilanayaan in ilmahooda ay bartaan luuqad kale oo dheerad ah ayey tiri maamulaha iskuulka.
Horey ayaa iskuulka wasiirka socdaalka Tobias Billström mar uu booqday ku sheegay in uu yahay iskuul ku dayasho mudan dhanka is-dhex-galka. Maamulaha iskuulka waxaa ka fajiciyey sida waalidiinta ay arrinkan uga gilgilsheen.
- Xaqiiqdii waxay igu noqotay layaab iyo niyad jab sida ay arrinkan waalidiinta uga gilgilsheen. Waxay u arkayey in arkin uu si fiican u shaqeynayey uuna yahay tillaabo lagu hagaajin karo wado-hadalka iyo isfahamka bulshada. Balse waxaa muuqata in ay wax badan noo dhiman yahiin ayey tiri maamulka iskuulka Cathrina Rooth.